Amasiko esintu – The Ulwazi Programme
Kuyisiko ukuthi uma intombi ilotsholwa iseyintombi nto noma ikhulelwe ikade iyintombi nto kunezinkomo ezikhokhwayo eziqondene nomama kanye nezintombi. Kunenkomo ekhishwa isoka ebizwa ngokuthi isidikli noma umgezo wezintombi. Uma kukhulelwe intombi kuphuma izinkomo ezintathu ukuyovala ihlazo emzini womnumzane. Lenkomo ngeyokuqala okufikwa nayo ikhulekwe ngaphandle kwesango, ihlatshelwe khona kukhishwe inyongo, kuchelwe ngayo umuzi, izintombi ziyogeza ngenyongo yayo … Read more
Ngibe nengxoxo noMnumzane Bongani Dube owazalwa ngo 1963 Novemba 11, ezalelwa endaweni yaseNdwedwe esigodini sakwaHlophe eduze nomuzi wakwaShembe, Ehhomisi. Manje usehlala endaweni yaseNanda, eCongo. Ukuhlambulula izidalwa noma idlozi yilapho usuke ugeza abantu bakini abangasekho emhlabeni. Ngokwenkolo yamaNazaretha kuthiwa uyazihlambulula. Inhloso yokuthi izidalwa zihlanjululwe ukuthi azize kahle kulowomuntu, okuthi uma ngabe enza umsebenzi izinto zakhe zilunge … Read more
Categories Culture Tags Amabandla, AmaNazaretha, Amasiko esintu, Ezenkolo, Religion, Shembe